Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo Faahfaahin Laga Bixiyay Dagaalkii Gurdumi
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO iyo Faahfaahin Laga Bixiyay Dagaalkii Gurdumi
Warbixintii Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa ka waramay dagaaladii ugu dambeeyay ee gudaha Ogadenya ku dhex maray CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya ayaa cadawga lagaga dilay 42 askari oo darajooyin kala duwan lahaa iyo dhaawac farabadn oy kala tageen goobihii la’isku fara saaray. Dagaaladan ugu dambeeyay waxaa kamid ah weerarkii ay CWXO ku qaadeen xeryaha Wayaanaha ee Aadaama-bari halkaasoo ciidanka gumaysiga lagu gaadhsiiyay dharbaaxo culus. Ciidanka Wayaanaha ee ku sugnaa Gurdumi ayaa dhexdooda ka dagaalamay oo ciidan farabadan iska laayay intaan lakala dhex galin. Sababta ay ku dagaalameen ayaa weli cadayn, waxaase socotay baryahanba shaki farabadan oo ciidamada Itobiya soo kala dhex galay iyadoo xerya badan ku dhex dagaalamay.
Dagaaladii ugu dambeeyey ayaa sidan u dhacay:
5/5/15 Isweedhka oo Dagmada Qabribaxay ee Gobolka Faafan katirsan dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga ku dhexmaray waxaa ciidanka dulmiga ku caanbaxay ee Itoobiya lagaga dilay inta lahubo 6 askari 7 kalana waa lagaga dhaawacay.
5/5/15 Haar-kaneeco oo Dagmada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka Jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 2 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
9/5/15 Aadaama-bari oo Dagamada Dhagaxmadow katirsan weerar aad uculus oo ay CWXO kuqaadeen ciidamada niyada jabsan ee gumaysiga oo halkaas ku sugnaa waxaa dhagta dhiiga loodaray 30 askari oo kamid ah huubada uu gumaysigu soomarin habaabiyay 45 kalana waa lagaga dhaawacay.
10/5/15 Dhalacad oo Dagmada Qabridahare ee Xarunta Gobolka Qoraxay katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 4 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
11/5/15 Bariisocade oo Qabridahare katirsan dagaal aad u culus oo CWXO iyo kuwa gumaysiga ku dhexmaray waxaa ciidankii wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare naf iyo maalba leh oo aan faahfaahintiisa lahaynin.
11/5/15 Dhuxun oo Gobolka Nogob katirsan dagaal ku dhexmaray ciidanka gumaysiga dhexdiisa waxay iskaga dileen 1 askari 1 kalana way iskaga dhaawaceen.
8/5/15 Jigjiga waxay ciidanka wayaanuhu lugooyay iskaga dileen 2 askari tiro kalana way iskaga dhaawaceen.
8/5/15 Gurdumi oo Dagmada Awaare katirsan dagaal aad u culus oo mudo dheer socday oo ka dhexmaray 2 garab oo ciidanka Wayaanaha kawada tirsan waxay iskaga dileen 51 askari tiro aan laxaqiijinina way iskaga dhaawaceen.